4 အလွှာ PCB Quickturn PCB တဦးတည်း panel ကို FR4 ပစ္စည်း ENIG 2u "Fast Delivery ပေါက်ကြေးနီ 25um အတွက်နှစ်မျိုး - တရုတ်နိုင်ငံ4အလွှာ PCB Quickturn PCB တဦးတည်း panel ကို FR4 ပစ္စည်း ENIG 2u "Fast Delivery ပေါက်ကြေးနီ 25um ပေးသွင်းအတွက်နှစ်မျိုး,စက်ရုံ -WMD
Flex ကိုတင်းကျပ် PCB
ရွှေ Finger PCB
မြင့်မားသော TG PCB
Tel:0086 0755-23592185 E-mail ကို:VIP168@wmdpcb.com
Shenzhen WMD Circuits, Ltd.
ထိပ်တန်းအရည်အသွေး PCB ထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ပြေးပုံစံ PCB
4 အလွှာ PCB Quickturn PCB တဦးတည်း panel ကို FR4 ပစ္စည်း ENIG 2u "Fast Delivery ပေါက်ကြေးနီ 25um အတွက်နှစ်မျိုး
1 PC များ
Gerber အပေါ် အခြေခံ.
လေဟာနယ် အထုပ်,10pnl / အိတ်
TT လွှဲပြောင်း / paypal / Western Union / DDU
ISO ကို 9001
ဘုတ်အဖွဲ့ Size ကို:
225*144MM / 1panel
ဖန်မျှင်ထည် Epoxy, FR4
Min.Line အကျယ် / Space ကို:
4 အလွှာ ENIG 2U”
အနိမ့် Hole Size ကို:
4 အလွှာ ENIG ဘုတ်အဖွဲ့. base ပစ္စည်း FR4 Tg140 ဖြစ်ပါသည်. 1.6မီလီမီတာ±0.13မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. အာဖရိကသမဂ္ဂ 2u နှင့်အတူနှစ်မြှုပ်ခြင်းကိုရွှေ” Ni 200U ", ရှိသည်2တဦးတည်း panel ကိုအတွက်ဒီဇိုင်းများ. အဆိုပါ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်4ENIG မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့်အတူအလွှာ. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်. PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူ, အွန်လိုင်း PCB ဒီဇိုင်နာ, စျေးပေါ circuit board ။ ကျနော်တို့ပစ္စည်း FR4 ရှိ, Roger, Arlon, Nelco, Taconic, Teflon, CEM-1, CEM-3, လူမီနီယမ်, HIGH TG ဘုတ်အဖွဲ့, အမြင့် CTI,
ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့ ,Flex ဘုတ်အဖွဲ့ ,ဒါကြောင့်အပေါ်ဘုတ်အဖွဲ့-တင်းကျပ်ကွေးနှင့်. ကျနော်တို့လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် သငျသညျ ---- ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖောက်သည်တစ်ဦးဝင်း-ဝင်းစီးပွားရေးမိတ်ဖက်တည်ထောင်ရန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပျဉ်ပြားဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, အာကာသ, လုံခွုံရေး, အိုင်တီ, ကွန်ပျူတာ, ဆေးဘက် ပစ္စည်းကရိယာ, စစ်ရေး, ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ် နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု. semiconductor.
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အချိန်ပေးပို့အပေါ်.
2 အလွှာတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့အမြင့် TG ဘုတ်အဖွဲ့ 0.031 ထူသောအပြာရောင် IPC အတန်းအစားⅢ PCB ထုတ်လုပ်သူ Mask
တင်းကျပ်-Flex ကိုဘုတ်အဖွဲ့2အလွှာ ENIG 1oz PCB အမြင့် Precision PCB
4 peelable မျက်နှာဖုံး PCB FR4 Tg135 HASL နှင့်အတူအလွှာတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့အခမဲ့ PCB ul IPC လမ်းညွှန်ချက် 1/1/1 / အောင်စကြေးနီစာရင်းပေါက်ဦးဆောင်လမ်းပြ
4 အလွှာအပြင် 1OZ, အတွင်းစိတ် 1OZ Taiyo RSR 4000 အဖြူနှင့်အစိမ်း Soldermask 1 အဆိုပါ Hole အတွင်းပိုင်း Mil ကြေးနီ
နေရပ်လိပ်စာ: တည်ဆောက်ခြင်း 3, Lisheng စက်မှုပန်းခြံ, Qiaotang လမ်း, Fuyong မြို့, Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်နိုင်ငံ.
ကျွန်တော်တို့ကို Call:0086 0755-23592185
မူပိုင်ခွင့်© Shenzhen WMD Circuits, Ltd.